Akụkọ - Ọdịiche dị n’etiti moto vibration na moto nkịtị
Ejiri igwe eletrik nwere ihe ndozi nke ikuku eccentric na-adaba na nsọtụ abụọ nke rotor rotor, a na-enwetakwa ike nchegharị site na ike centrifugal nke ntụgharị ọsọ ọsọ nke osisi na eccentric block mepụtara. Ugboro ugboro nke ịma jijiji dị ukwuu, ma igwe arụ ọrụ nwere ike ibelata naanị mgbe ike na ikike ga-adaba adaba. E nwere ọkwa isii nke motọ vibration dịka mbido na ọnọdụ ọrụ yana ọsọ ọsọ.
Igwe nkịtị bụ nke a na-akpọkarị "moto" na-ezo aka na ngwaọrụ electromagnetic nke na-achọpụta ntụgharị ma ọ bụ nnyefe nke ike eletrik dị ka iwu nke electromagnetic induction. Mkpụrụ akwụkwọ ahụ na-anọchi anya leta M na sekit (ọkọlọtọ ochie bụ D). Ya isi ọrụ bụ n'ịwa ịnya ụgbọ torque. Dị ka isi iyi maka ngwa eletriki ma ọ bụ igwe dị iche iche, mkpụrụ edemede G na-anọchi anya generator na sekit. Isi ọrụ ya bụ Ọrụ bụ ịtụgharị ike igwe na ike eletrik.
Kedu ihe dị iche na moto vibration na moto nkịtị?
Ọdịdị dị n'ime igwe nke ọma jijiji dị ka nke moto nkịtị. Ihe kachasị dị iche bụ na a na-arụ ọrụ igwe vibration nwere ihe ndozi nke ikuku eccentric na-akwụsị na nsọtụ abụọ nke rotor rotor, a na-enwetakwa ike na-akpali akpali site na ike centrifugal nke ntụgharị ọsọ ọsọ nke ogwe na oghere eccentric mepụtara. Zụ ọma jijiji na-achọ ikike mgbochi ịma jijiji na akụkụ igwe na eletriki karịa igwe ndị nkịtị. Ogwe igwe rotor nke otu ike ọkwa siri ike karịa nke nke moto nkịtị nke otu ọkwa.
N'ezie, mgbe e mepụtara moto vibration, nkwekọ kwekọrọ n'etiti osisi na ihe dị na ya dị iche na nke moto nkịtị. Ogwe ahụ na amị nke moto nkịtị ga-ejikọrịrị ya, na nkwekọ kwekọrọ n'etiti osisi ahụ na amị na moto vibration bụ ihe na-adaba adaba. Enwere oghere nke 0.01-0.015mm. N'ezie, ị ga-eche na osisi ahụ ga-aga n'aka ekpe na aka nri n'oge mmezi. N'ezie, nhazi nke a nwere ọrụ dị mkpa.